खाना महोत्सव र पर्यटन « Anumodan National Daily
खाना महोत्सव र पर्यटन
प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:२७
सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पहिलो पटक खाना महोत्सव अर्थात् फुड फेस्टिवल आयोजना हुदैछ । अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष जारी छ । त्यस्तै, धनगढीमा विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव आयोजना भइरहेको छ । यी समयमा होटल व्यवसायी संघ, कैलालीले फुड फेस्टिवल आयोजना गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय रुपमा मात्रै विविध छैन, विभिन्न समुदाय तथा क्षेत्रको मौलिक खानाको परिकारको विविधताका लागि धनी छ । त्यसैले यो फुड फेस्टिवल निश्चित रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न समुदायको मौलिक खानाका परिकारबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्नेमा विमति रहदैन । मौलिक रहनसहन, खानपिन, संस्कार तथा संस्कृति कुनै पनि जाति वा समुदायको बलियो परिचय हो । खानाको परिकार तथा अतिथिको स्वागत गर्ने विशिष्ट संस्कृतिले कुनै पनि जाति वा समुदाय कत्तिको संस्कारयुक्त छ ? भन्ने पनि दर्साउछ । त्यस्तै, मौलिक खानाका परिकार कुनै पनि समुदाय कत्तिको उन्नत छ भन्ने पनि द्योतक हुन्छ ।
धनगढीमा आयोजना भइरहेको फुड फेस्टिवलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा समुदायका लोप भइसकेका मौलिक खानाका परिकारको प्रस्तुति हुने नै छ । खानाका विभिन्न परिकारको सम्बन्ध पोषणसंग अर्थात् सन्तुलित आहारसंग पनि हुन्छ नै । अहिले पश्चिमा सभ्यता र संस्कृतिप्रतिको बढ्दो आकर्षणसंगै विभिन्न खालका आधुनिक भनिने परिकारको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्था छ । फाष्टफूडले मौलिक खानाका परिकारलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ । नया“ पुस्ताले आफ्नो विशिष्ट पहिचानका रुपमा रहेका खानाका परिकार भूल्दै गएको मात्रै छैन, संगसंगै मौलिक संस्कार र संस्कृति पनि बिर्सिदै गएको अवस्था छ । निश्चय पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा समुदायका मौलिक खानपानका परिकारको सहज प्राप्तीमा कठिनाई भइरहेको छ । विभिन्न कारणले कतिपय कृषि उत्पादन नै लोप भइसकेको अथवा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले पनि धनगढीमा आयोजना हुने फुड फेस्टिवलले यस प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा समुदायको लोप भइसकेका खानाका परिकारबारे जानकारी दिने र प्रचारप्रसारमा टेवा पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
कैलाली होटल व्यवसायी संघले आयोजना गरेको यो फुड फेस्टिवलको अवधिमा कति जनाले अवलोकन गर्छन् वा कति जनाले विभिन्न परिकारको स्वाद लिनेछन् ? भन्ने अर्को पाटो हो, प्रमुख पक्ष भनेको यो आयोजनाले सुदूरपश्चिमको मौलिक परिकारहरु तथा आतिथ्य संस्कारको उद्घाटन गर्छ भन्ने नै हो । विश्वभरिका नेपाली भाषी साहित्यकारहरू जमघट हुने तथा नेपाल भ्रमण वर्ष जारी रहेको सन्दर्भमा यो फुड फेस्टिवललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौलिक खानाका परिकार, पाहुना स्वागत संस्कारलाई उन्नत ढंगले प्रस्तुत गर्ने अवसरकार रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपाल भ्रमण वर्ष जारी रहदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट भइरहेका विभिन्न प्रयास र गतिविधिमा फुड फेस्टिवल जस्ता कार्यक्रमलाई सफल बनाउनेतर्फ आयोजक पक्ष मात्रै नभएर सबैको अग्रसरता आवश्यक हुन्छ ।